mini skirt တွေ အီတလီ ကမ်းခြေမြို့လေးမှာ ၀တ်ဆင်မှူတားမြစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » mini skirt တွေ အီတလီ ကမ်းခြေမြို့လေးမှာ ၀တ်ဆင်မှူတားမြစ်
mini skirt တွေ အီတလီ ကမ်းခြေမြို့လေးမှာ ၀တ်ဆင်မှူတားမြစ်
Posted by etone on Nov 1, 2010 in News |7comments
Castellammare di Stabia ဆိုတဲ့ အီတလီနိုင်ငံ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မြို့လေးမှာ မီနီစကတ် နှင့် တိုကပ်လွန်းသော ဘောင်းဘီတို ၊ ဂျင်းပန်များ ၀တ်ဆင်မှူ တားမြစ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ မြို့ပြရဲ့စည်းစနစ်ကျမှူပြုပြင်ပေးရာရောက်ပြီး လူမှူကျင့်ဝတ်များကို ထိန်းသိမ်းပေးရာရောက်စေရန် ရည်ရွယ်၍တားမြစ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဒဏ်ကြေးကို EUR 25 နဲ့ EUR 500 သတ်မှတ်ထားပြီး စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူများမှ ပေးဆောင်ရမည်ဟုလည်းသိရသည်။ အမြင်မတင့်တယ်သော မတော်တရော် အ၀တ်စားအားလုံးကို ပိတ်ပင်များဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည် ။ ထို့အပြင် အများပြည်သူပိုင်နေရာ မှာ အနှောက်ယှက်ပေးသော အပြုမူမျိုး အပြောအဆိုမျိုးကိုလည်း မကြာမီတွင် တားမြစ်လာဦးမည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဘစ်ဂနီဖက်ရှင်ဖြစ်မလာခင် အဲ့ဒီလိုထိန်းသိမ်းတာမျိုးလုပ်သင့်နေပြီနော်… အထူးသဖြင့်မိဘတွေ ၊ အစ်ကိုတွေ ၊မောင်တွေက နီးစပ်ရာကိုထိန်းသင့်နေပြီ ။
ဒီမှာတော့ ..နောက်တက်မယ့် အစိုးရက ဘယ်လို ထိန်းသွားမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ ..
အခုတော့ .. ရပ်ကွက်ထဲမှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီသာသာလောက်နဲ့ လမ်းလျှောက်တဲ့ အသားဖြူဖြူ နှာခေါင်းပြားပြားတွေ များလာပြီ .. အသားညိုညိုတွေလဲ လိုက်တုနေကြပြီ
အဲလို ဥပဒေထုတ်တာလည်း ကောင်းတာဘဲ.. အတို အပြတ်တွေ ၀တ်နေတာ ငွေနဲ့ ထိန်းချုပ်လိုက်ရင်.. အေးဆေးဘဲ.. သူဟာသူ ငြိမ်သွားမယ်..
သို့သော်.. အတိုအပြတ်အတွက်.. လူတန်းစား ၂မျိုးဖြစ်မည်ထင်သည်။
ငွေမဆောင်နိုင်လို့ မ၀တ်တဲ့ လူတန်းစား..
ဒီမှာတောင်မှ ငွေဆောင်နိုင်မှ ငွေဆောင်သွားပြီးကဲနိုင်မှာလေ .. ငွေမဆောင်နိုင်ရင် အိမ်က စဉ့်အိုးထဲက ရေပဲ ခပ်ချိုးရမှာ ..
တစ်ခုတော့ တွေးမိတယ် .. လစဉ် အစည်းအဝေးမတက်ရင် ၂၀၀၀ ကောက်တယ် ဆိုပါတော့ .. အဲဒီတော့ တစ်ယောက်က အစည်းအဝေး မတက်ချင်ဘူးဗျာ .. တစ်နှစ်စာ ၂၄၀၀၀ ပေးမယ် ဆိုရင် လက်ခံဖို့ သင့် မသင့် ..
အဲဒီလိုပဲ .. ချချင်တဲ့ ဒဏ်ငွေချ .. ၀တ်မယ် .. ဒဏ်ငွေ ပေးမယ် .. ဆိုတဲ့လူရယ် ..
မင်း ဒဏ်တပ်ရဲရင် တပ်ကြည့် အကြောင်းသိသွားမယ် ဆိုတဲ့ လူရယ် ကို ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ …???
အစည်းဝေးမတက်ဘူး ငွေပေးမယ်ဆိုတဲ့လူကို သူ့သဘောအတိုင်းလုပ်ဆောင်စေမှာပါ ။ အစည်းဝေးမှာ ရပိုင်ခွင့်တွေနည်းနည်းပေးပြီး မြှူဆွယ်ရင် သူပိုက်ဆံတတ်နိုင်လို့ အစည်းဝေးမလာချင်ရင်တောင် ရပိုင်ခွင့်လိုချင်လို့လာရမဲ့အနေထားမျိုးပါ ။
မင်း ဒဏ်တပ်ရဲရင် တပ်ကြည့် အကြောင်းသိသွားမယ် ဆိုတဲ့ လူရယ် ကို ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ …??? ဆိုတဲ့လူမျိုးကတော့ လူရမ်းကားမျိုးထဲပါမယ်ထင်တယ် ။ ဒဏ်ကြေးကို သတ်မှတ်တဲ့လူကလည်း သူ့နေရာမှာ သူအထိုက်အလျှောက်အာဏာရှိတဲ့လူမျိုးမို့ သတ်မှတ်ချက်ပြုလုပ်နိုင်တာပါ ။ ဒီလိုလူမျိုးကို စိန်ခေါ်ရဲတဲ့လူကတော့ သူ့မိန်းမ၊ သား၊ သမီး၊ မြေး မဟုတ်ရင် လူရမ်းကားပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ။ ထိုလိုလူမျိုးကို ဝေးဝေးက ရှောင်ပါမည် … ဟီးဟီး ကြောက်လို့ပါ ။
အမလေး ဒါလေးများ အတိုဝတ်တဲ့အမျိုးသမီးထုကတော့ အေးဆေးပါ
စည်းကမ်းထုတ်မယ်တော့မထင် အတိုဝတ်တာပဲဘာဖြစ်လဲ ဒီရာသီဥတုနဲ့လဲကိုက်တာပဲနော ဟုတ်ဘူးလား